Sayensị, Nkà na ụzụ, Asụsụ | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Akwụkwọ: Science, Technics, Asụsụ
Kedu ihe ọzọ ọnwa ma ọ bụ ụwa?
Kedu ihe ọzọ ọnwa ma ọ bụ ụwa? Ọnwa bụ mbara igwe nke ụwa ọ dị ntakịrị. . Ajụjụ agbagwoju anya gbasara nha! Achọrọ mwube ma ọ bụ ebe dị elu? Nzuzo nke ụwa bụ 6 ka ogo 10. Anyanwụ bụ nnukwu. ...
Enwere ike iweghachite Tesla Nikola Tesla?
Enwere ike iweghachite Tesla Nikola Tesla? Mgbanwe nke ụgbọ eletrik Nikola Tesla Na atụmatụ Tesla eletrik, ihe a na-ewere dịka onye na-anakọta (igbe ojii na mkpara abụọ n'azụ azụ azụ) bụ doro anya na ọ bụ transmitter.
Kedu ihe bụ liquidus?
Gịnị bụ fluidus? Nke a bụ oke egwu dị na Abakan Liquidus - na eserese nke usoro nke usoro agbazere nke usoro siri ike. Ihe ozo di otua, ma nke ozo n ’uzo ihe siri ike. Liquidus okpomọkụ (nke H.Yoder, 1976) TL - ...
Kedu ka MDF si dị?
Kedu ka MDF si dị? Fedya nwanne m na-adịghị ọcha The abbreviation MDF na-anọchite anya Medium Density Fiberboard. MDF wee pụta dị ka mmepe nke usoro akọrọ maka mmepụta efere fiberboard. Ihe bụ ...
Kedu ihe na-emetụta?
Gịnị bụ imprinti? Mmetụta ya (Eng. Akara - hapụ otu ụzọ, ijide, dozie), usoro nke ịkwụsi ike na psyche mgbe otu ọhụụ mechara. O bu udiri nkuzi na ngwa ngwa nke mmadu na ...
Onwere onye maara ihe mmanụ gas na-eme?
Onwere onye maara ihe mmanụ gas na-eme? mmiri, soot, carbon dioxide, carbon monoxide. Ngwakọta ngwaahịa mmanụ na mgbochi. ọkachasị mmiri na carbon dioxide dịka adịghị ọcha - carbon monoxide…
Ole ndị na-achọpụta bacteria?
Ole ndị na-achọpụta bacteria? Na nke mbụ, a hụrụ nje bacteria na microscope na-ahụ anya ma kọwapụtara ndị mmadụ Dutch bụ Anthony van Leeuwenhoek na 1676. Dika ndi mmadu nile di nfe, o kporo ha ...
Kedu ka usoro mmepụta ihe si dị iche na mmepụta ihe?
Kedu ka usoro mmepụta ihe si dị iche na mmepụta ihe? Na mmepụta ihe uka, a na-emepụta ngwaahịa site na-emechi ya mgbe niile n'ebe ọrụ nke otu ọrụ na-eme ugboro ugboro. Nkọwapụta aha, nnukwu olu nke na-aga n'ihu na ...
Ebee ka osimiri Ik na-asọ?
Ebee ka osimiri Ik na-asọ? Ik, Bolshoy Ik, osimiri dị na Soviet Soviet Socialist Republic na Bashkir na Soviet Socialist Republic nke Tatar, bụ ndị fọdụrụ na ekpe Kama. Ogologo 571 kilomita, ebe ntanetị 18000 km2. Ọ na-asọkarị n'ime Bugulma-Belebeevskaya ...
Ebee na onye mbụ wee jiri ìhè bọlbụ
Kedụ na onye buru ụzọ bido Bulb Kedu ka ọ ga-esi bụrụ LENIN! "Oriọna Ilyich" Na St. Petersburg Yablochkov Ọfụma, onye ọ bụla agwalarị gị maka bọmbụ oriọna ... Ọ dị mma, otu nde mmadụ butere oriọna (Lamp, Eulampius) ...
Gịnị bụ omenala ime mmụọ?
Gịnị bụ omenala ime mmụọ? + Ndidi + Ntachi Obi + Na-aga n'Ihu + Joy + Creativity + Obiọma + Ịghọta + Ịghọta Ihe Echiche + bụ ụwa ime gị na ndị ọzọ. Nke a bụ ihe ị na-enweghị ma ọ gaghị adị. : ...
Kedu esi nweta chlorine oxides? ClO, ClO2, Cl2O7 ... Gini bu mmeghachi omume?
Etu esi enweta chlorine oxides? ClO, ClO2, Cl2O7 ... Kedu mmeghachi omume ha? A ga m agwa gị ihe nzuzo, ịnweta nitrogen oxides dị mma karịa. mgbe ike gwụrụ chlorine, gbalị na nro okpomọkụ dị na 3% nitric acid…
na mmiri dị aṅaa ka mmiri ahụ mebiri
kedu ụdị ọnọdụ mmiri ahụ na-akwụsịlata n'okpuru efu. Ndewo A na-anakwere ya na n'okpuru nrụgide ikuku nkịtị na ọnụnọ nke obere mweghachi na mmiri - mkpuke nuclei, mmiri na-amalite iti mkpu n'oge ntakịrị mmetụta ...
Ụkpụrụ nke ụgwọ ọnụ.
Ofkpụrụ nke ụgwọ cumulative. Mgbe achọrọ mkpokọ, ike nke ihe gbawara na-aga n'etiti ebe akwa ahụ wee gbaga n'ihu. A na - ahụ ihe a na - akpọ Monro na - arụ ọrụ nke sistemụ ya ka bụ ...
Kedu ihe bụ isomorphism? nkwupụta ụbụrụ?
Gịnị bụ isomorphism? omume nnakpo? Homomorphism (site na homo ... na Greek. Ụdị Morphe, ụdị), echiche nke mgbakọ na mwepụ na mgbagha, bụ nke bilitere na mbụ na algebra, mana ọ bịara bụrụ ihe dị oke mkpa maka ịghọta usoro na ubi enwere ike ...
Kedu ihe bụ echiche ọhụrụ banyere mmalite mmadụ?
Gịnị bụ echiche ọhụrụ banyere mmalite mmadụ? na ee, nke ahụ bụ isi okwu - mmalite mmadụ adịghị nfe, dịka ha na-echebu na mbụ, dịka ọmụmaatụ, ha chere na…
Insurgent onye bụ nke a ??
Onye bu onye agha? Insurgents (ndị nnupụisi, ndị agha nnupụisi) - ndị agha nke ndị nkịtị, na-emegide ndị ọchịchị. Mgbe ụfọdụ a na-akpọkwa ha ndị ọrụ dissidents, n'agbanyeghị na odi ole na ole myirịta dị n’etiti ndị na-atụghị anya Omenala na ndị ekwenyeghị. Ọtụtụ mgbe ndị na-emegide ọchịchị ...
Gịnị ka “onye pụtara ìhè” pụtara?
Gịnị ka “onye pụtara ìhè” pụtara? pụrụ iche, ndịiche site na igwe mmadụ site na amamiihe ... ekele nke ọkọwa okwu na-enye nkọwa a maka ngwa. RANDOM: Ihe pụrụ iche, iche n'etiti ndị ọzọ. promiscuous bụ a otito site n'ụzọ), pụtara na-abụghị ọkọlọtọ ...
Ebee ka e si nweta aha ahụ “ọla nchara”?
Ebee ka e si nweta aha ahụ “ọla nchara”? Vorone # 769; iron (oxidation, blackening, blueing) bu usoro iji weputa okpukpu nke iron oxides (Fe3O4 na ndi ozo) nwere okpukpu dikwa 1-10 n ’elu carbon ma obu ala nke igwe ma obu ihe nkedo…
Kụziere m ịsụgharị, dịka ọmụmaatụ, NCL n'ime C-oge. Amaara m otu esi edozi nsogbu, mana amaghị m otu esi asụgharị ụkpụrụ.
Kụziere m ịsụgharị, dịka ọmụmaatụ, NCL n'ime C-oge. Amaara m otu esi edozi nsogbu, mana amaghị m otu esi asụgharị ụkpụrụ. M na-eji ohere ọ bụla mụbaa na-enweghị isi na-agbanwe agbanwe. Dịka ọmụmaatụ 36 ...
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,850.